Gbasara anyị - Nnukwu V Bucks
Nabata na ntanetị kachasị mma maka n'efu V Bucks. N'inwela ntọala site n'aka ụmụ nwoke ndị nwere nkà na ụzụ, saịtị a na-egosi na ọ ga-abụ ụlọ ahịa ga-akwụsị otu V nke a na-akwụghị ụgwọ. Ọ na - eme ngwa ngwa ịbụ ebe nrụọrụ a na - eme ihe ọ bụla. Agbanyeghị na anyị enweghị akụkọ ntolite nke ọnụnọ ntanetị ogologo oge, ọrụ siri ike na oke agụụ anyị etinyela anyị na maapụ.
Ndị na-ege ntị na-ege ntị na-ahụwanye ọrụ anyị n'anya. Obi dị anyị ụtọ na saịtị ndị na-ekwu maka usoro aghụghọ egwuregwu adịghị agba ama. Anyị na-anata nyocha dị mma ma na-agba ume oge niile. Yabụ, ọ na-egosi n'ezie oge anyị na mbọ anyị.
N'ikwu eziokwu, anyị enweghị nnukwu otu. Mana, obere ndị otu anyị ga - enwe ike idobe ndị aghụghọ egwuregwu anyị na - agba ọsọ oge niile na - enwetaghị mgbochi ọ bụla. Na mgbakwunye, anyị nwere ụmụ nwoke abụọ na-elekọta sava, njedebe njedebe, na ihe ọ bụla ọzọ na-abanye na ndozi weebụsaịtị.
Ka ọ dị ugbu a, anyị enyerela ọtụtụ iri puku na ndị egwuregwu nọ ebe ahụ aka. Ma, ebum n’uche anyị na-aga n’ihu ịbụ otu ihe. Anyị chọrọ inyere ọtụtụ ndị egwuregwu abalị ka o kwere omume ịhapụ ha ka ha kpata egwuregwu ahụ n'ụzọ zuru oke na-enweghị nọrọ obere akpa na obere akpa ha. Ọ bụrụhaala na ị na-egwu Fortnight, ị nwere ike ịdabere na anyị iji nyere gị aka pụọ.
Anyị kwenyesiri ike na ndị otu anyị nwere mmekọrịta ga-aga n'ihu na-enye gị ahụmịhe kachasị mma nke onye ọrụ. Ka saịtị ahụ na-abawanye, anyị na-etinye ụkwụ kachasị mma ka anyị wee gbasoo mgbọrọgwụ anyị. Anyị na-agbasi mbọ ike ka emelite egwuregwu Ndị aghụghọ anyị n'oge niile ka ị ghara itinye ọnụ n'okwu ọ bụla. Drivegbọala anyị ga-adịgide, anyị na-atụkwa anya igbo mkpa gị niile.